Ma Rumaysan in Sheekh Shafiif ku Markhaati Furay Bashir Axmed Makhtal[Canadian Citizen] – Rasaasa News
Jul 31, 2009 Somalia regions of Ethiopia
Aamin ama ha aamin Somali Idilkeed Itobiyey ahaatay, Amarkaa ninkii diidana waa la asturaa, Ogadeen baan midaas Ogayne yaw arimihi haa [siiqada ciwaanku waxay ka timid degmada balcad Somaliya]
Warar aan la qorin oo aan la ogayn run iyo been wax ay yihiin ayaa waxaa aad isula dhexmaraya dadweynaha Somalida Ogadeeniya, wararkan oo sheegaya in Bashiir Axmed Makhtal, oo ah nin haysta dhalashada dalka Canada, uu Maxbuus ku ahaa Saddexdii sano ee ugu dambaysay dalka Itobiya isaga oo lagu haysto in uu ahaa xubin sare oo ka tirsan ururka ONLF. Ururka ONLF oo ah urur u dagaalama xoreynta dadka Somalida ah ee degan dhulka Ogaden, ayaa waxaa uu waday halgan uu kaga soo horjeedo Itobiya 18 sano ee ugu dambaysay. Ururka ONLF oo ay Itobiya u caalwayday in ay ka saarto dhulka Ogaden, ayaa waxay aaminsantahay in ururka ONLF xooga dhaqdhaqaaqiisu uu ka imanayo dhanla dalka Somaliya, taas oo ay had iyo goorba beeniso Jabhada ONLF.
Itobiya oo ah, xudunta colaada dawlad la,aaneed ee ka jirta dalka Somaliya, ayaa sabab u ahayd dumistii qarankii Somaliyeed, tan iyo intii uu dumay qarankii Somaliyeedna waxay u xusul duubtaa in ayna imanin dawlad Somali ah oo ay lee yihiin dadka Somalidu, arintaas oo ay garanayso cid kasta oo u damqanaysa Somaliya. Itobiya waxaa ay masuul ka tahay xabad kasta oo taala Somliya, waxayna in ka badan 30 sano ku soo daldalaysay hub iyo rasaas, Itobiya waxaa ay ku jirtaa gola kasta oo lagaga xaajoonayo dhibaatada Somaliya waxayna ka shaqaysaa sidii ayna Somali dib isugu soo noqoteen, ilaa iyo xadna way ku guulaysatay oo xuduud ayey u samaysay.
Itobiya waxay marna ku guulaysan weyday in ay ka saarto Jabhada ONLF dhulka Somalida Ogadeeniya, si ay uga guulaysato waxaa ay samaysay arimo xad gudub ku ah xuquuqda Adanaha. Waxay si sharci daro ah ku gashay dalka Somaliya oo ay ka gaysatay arimo dunuub ah, waxaa kale oo ay xasuuqday dadweyne shacab ah oo degan dhulka Somalida Ogadeeniya. Arintaas xad gudubka oo aan ilaa iyo maanta maxkamad loo soo taagin xukuumada Itobiya iyo shakhsiyaadkii galay dambiyada, walina waxaa socota dadaalo lagu doonayo in mar maxkamad la keeno dadwlada Itobiya.
Sida ay doontaba ha u dhacdee, Itobiya, waxaa ay marstay xukuumada maraykanaka iyo dalalka reer galbeedka ee deeqaha bixiya, in arinta siyaasadeed ee Somaliya iyada looga dambeeyo. Waana arintaas mida aan marna Itobiya loo ogolayn in ay lugta kala baxdo arimaha Somalida, waxaa kale oo iyana jirta in dhulka Somalida Ogadeeniya dhinaca xuduuda Somaliya uu aad qani ugu yahay gaaska cad, wayna adag tahay in la soo saaro inta ay jirto xukuumad Somaliyeed oo ka shaqaynaysa danaha dadweynaha Somaliyeed ee degan geeska Afrika.
Dawlada Maraykanaku waxay aad u xiisaynaysaa gaaska cad ee Ogaden [Ogaden natural gas], waxayna samayn wax walba oo ay ku xasilin karto geeska Afrika iyada oo aan u danaynayn dadka Somaliyeed ee madaxa adag. Waana arintaas arinta Itobiya loogu wakiishay in ay xasiliso qaska Somaliya iyada oo burburinaysa qaranimada Somaliyeed, iskuna dayeysa in ay samayso xukuumado is neceb oo ay lee yihiin qabiilada Somaliyeed.
Itobiya oo ah dalka ugu fakhrisan aduunka waxaa ka socda mashaariicda ugu qaalisan qaarada Afrika, waxayna ujeedadu tahay in ay Itobiya ka samaysanto xukuumad balaadhan oo aad u dhaga nugul oo dimoqraati ah sida dalka Hindiya [India].
Somalidu waa dad hanti jecel abuurina ogg [Materialist people], aragti gaaban, mawqif jilicsan oo ay ka maqan tahay wadaniyadu, damiirka dadnimo ma leh [human dignify]. Waxaa arimahaas daliil u ah in la qaato madaxda Somalida [as random sample], waxaana inagu filan sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwii ka horeeyey. Sheekh Axmed waa tusaalaha ugu fiican, Afkiisa si caalami ah waxaa looga hayaa in uu yidhi Somaliya Argagixiso ma joogto sanad ka dibna waxaa laga hayaa Somaliya argagixiso ayaa joogta oo aanan wada joognay kolkii aan maxkamadaha ahaa.
Waa yaabe sheekh Shariif ma Itobiyaabaa mise waa Maraykan, ninka jooga kursiga ugu sareeya Somaliya, hadii uu gondo goynayo dadweynaha Somaliyeed yaa Somali wanaag u samayn. Sheekh shariif waxaa uu bixiyey wax alaale wixii sir ay lahaayeen culimada Somaliyeed ee ku guulaystay in ay mideeyaan qalbiyada Somaliyeed, ee daxalaystay, soona celiyaan sharaftii iyo karaamadii ummada.
Warka Ciwaanka qormada ayaa ah sheekh shariif waxaa uu markhaati ku furay Bashiir Axmed Makhtal, shariifku waxaa uu u soo diray Addis Ababa rag loogu yeedhay in ay yihiin ururka Ahalu Suna Wal Jameeca oo ah dad cadaab galayaal ah oo ay Itobiya Samaysatay, culimada Islaamkana ceeb u soo jiiday.
Sida la sheegay waxaa goob joog ka ahaa qolka ay maxkamadu ka dhacday AlSuna Wal Jameeca, ka yimid dalka Somaliya oo horena u ahaan jiray xubno Maxkamadihii Islamlka si gaar ahna uu u soo diray Sheekh Shariif oo yidhi waa in aad sheegtaan sirtii hore oo dhan.
Waxaa dhab ah in ummada Somalida oo dhan ay u shaqayso Itobiya kolka laga reebo ururka ONLF, wixii hada ka horeeyey ahaa Somaliga kaliya ee ka war haysa waxa ay Itobiya doonayso in uu yahay dabar goynta ummada Somaliyeed.
Waxaad ila dhawrtaan sida ay u bahdilan yihiin kuwa madaxada u noqda Somaliya oo kuligood laga amro Addis Abeba.
Beeni Raad Ma Leh